Maalinta: Ogast 21, 2012
Munaasabadda furitaanka ra’iisul wasaare Tayyip Erdoğan KadıköyEagle Eagle Metro Sözcü Qoraaga wargeysku sidoo kale wuxuu ku jiray ajendaha Necati Doğru. ee geeska KadıköyIsbarbar dhigga Eagle Metro iyo Izmir Metro, Doğru, halka kiiloomitir Izmir Metro ay ku kacday 56 milyan, Kadıköy-Kartal [More ...]
13 kiiloomitir meel u jirta magaalada Bolu, oo ah xaqqa loo leeyahay in lagu maareeyo Gölcük Nature Park, oo martigelinaya iskudhaf buluug iyo cagaar ah, ayaa loo wareejiyay dowladda hoose ee Bolu iyada oo ay soo abaabushay qandaraas ay soo saartay Wasaaradda Dhirta iyo Biyaha. U kordhinta baarkinka illaa heerarka [More ...]
Qiimaha ayaa u duulay tareenka tareenka
Qiimaha guryaha, oo bilaabay inuu kor u kaco wadada metrooga, ayaa saqafka dhigay inta lagu gudajiro xilliga furitaanka. Kororka ugu sarreeya ee la soo maray Kozyatağı sanadkii la soo dhaafay, qiimaha guriga wuxuu ahaa 355 kun oo rodol 450 kun oo rodol. Dhinaca Anatolian-ka [More ...]
Dhibaatooyinka dhulka hoostiisa hoose
Waxaan dareemay inaan ku jiray gaariga ra'iisul wasaaraha cusub. Waxaan ka baqay inaan kibis ku cuno. Wuu iska bixi karaa isagoo qashin ah. “Tareenadu waxay socdaan dhammaadka adduunka. Baabuur kaxayn, qiyaastii tareenka magaalada loo raaco [More ...]
Inkasta oo nidaamyada tareenada ay ku sii bataan Bursa, ganacsatada darawaliintu waa inaan la dhibin
Ku-xigeenka AK Party Bursa Bedrettin Yildirim, oo looga golleeyahay samaynta gaadiid tareenka magaalada T1 tareenka dhismaha, "Nidaamyada tareenka ayaa noqday mid fidsan, darawallada waa inaan la dhibaateyn ganacsatada." [More ...]
Tareenka ayaa kor u kacaya!
In kasta oo dhalleeceyn iyo digniino loo jeedinayo, waxaa la bilaabay dhismaha wadada tareenka ee u dhaxaysa Atatürk Avenue, Kent Square iyo Altıparmak. Xaqiiqada ah in Rugta Injineerada madaniga ah iyo Rugta Qorsheyaasha Magaalada ay dacweynayaan mashruuca [More ...]
Duqa Magaalada Magaalada Izmir Aziz Kocaoglu ayaa ka hadlay mashruucyada magaalooyinka iyo taraamyada oo sanado badan mashquul ku ahaa ajandaha magaalada. Duqa Kocaoğlu, oo aan waqti ku siinin wadada tareenka, ayaa yidhi daam [More ...]
Immisa km oo tareen ayaa la dhigay?
Raiisel wasaare Tayyip Erdogan, 10. Heesta sanadka 'Maxaad duubtay?' Markii aan nidhaahno, waxaan baarnay imisa kilomitir oo biraha laamiga ah la dhigay. Sida ku xusan warbixin sanadeedka TCDD ee 2011, 1923 waxaa lagu bilaabay 1951 leh [More ...]
Agaasimaha Saldhigga tareenka TCDD Eskişehir Süleyman Hilmi Özer wuxuu sheegay in heerka deganaanshaha ee HAT uu gaaray 100 boqolkiiba wuxuuna yiri, birçok Inbadan oo kamid ah tareenadayada ayaa boqolkiiba boqol buuxsan. Tareennada qaar waxay marayaan boqolkiiba sagaashan. Tigidhkooda [More ...]
Waxaannu London ku qaban doonaa boqol sano.
Iyada oo weeraradii ugu dambeeyay ee ka dhacay Istanbul, dhererka tareenka dhulka hoostiisa mara wuxuu gaadhay xNUMX kilomitir tan iyo 'Taariikhda Jamhuuriga'. Xawaaraha dhismaha mitirka 180 wuxuu dhaaftay 10 kiiloomitir sanadkii. Turkey waa dunida this si deg deg ah u dhaco [More ...]
Mowqifka Metrobus ee xoogga leh
Munaasabad Ciidul Fidriga ah oo ka dhacday Magaalada Istanbul, Muwaadiniin metrobüste ah oo booqday Magaalada ayaa sababay cufnaanta. Gawaarida waaweyn ee loo yaqaan 'Metrobuses', oo ah mid ka mid ah dariiqooyinka ugu muhiimsan ee gaadiidka ee Istanbul, ayaa baahi weyn loo qabay xaflada awgeed. Boqolkiiba 50 ee muwaadiniinta qiimeynaya fasaxa Ramadaanka ee Istanbul [More ...]
Ogeysiis Qandaraasle ah: SBB 4 Lambarka Tareenka Dhismaha Khadadka
SBB 4 PCS LIGHT RAIL SYSTEM STATION CONSTRUCTION CONbis Information Unit Information Corporate Information Unit: Agaasinka Arimaha Arimaha Sayniska Cinwaanka Macluumaadka Cinwaanka: Yağcılar Mahallesi Yorgalar Qabuuraha Ku Xiga Bilano ADAPAZARI / SAKARYA Telefoonka: Fakada 2642823820: 2642823823 [More ...]
Maanta taariikhda: 21 Agoosto 1941 Akpınar-Kurukavak (5. Km) ayaa la dhisay.
21 Agoosto 1941 Akpınar-Kurukavak (5. Km) ayaa la bilaabay.